Tag: ika | Martech Zone
Izu a, Anọ m na saịtị ahụ na-eme ihe ntanetị ahịa nke dijitalụ maka akara ụwa. The omumuihe a bụ na facilitated site m na-ngalaba-mepụtara na akụkụ na Butler University na ihe ịtụnanya nkụzi na oge-n'ime nzukọ. Mgbe anyị rutere na ngalaba Martech Stack nke ikpo okwu iji kụziere ndị ọrụ na teknụzụ teknụzụ n'ime nzukọ ahụ, enwere m ntụpọ na ngwakọta nke nyiwe. Ọ pụtaghị dịka Martech Stack gị nkịtị
Ihe dị ka otu ọnwa gara aga, agara m sonye na nzukọ ịzụ ahịa ahịa maka onye ahịa. Ọ dị mma, na-arụ ọrụ na ndụmọdụ a maara maka ịmepụta ụzọ maka ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ dị elu. Ka e mepụtara ụzọ ahụ, ụzọ ndị pụrụ iche na ndịiche dị iche iche ndị otu ahụ bịara masịrị m. Otú ọ dị, ekpebisikwara m ike ịhapụ ndị otu ahụ n'ahịa a lekwasịrị anya. Innovation bu atumatu di oke nkpa na otutu ulo oru taa, ma